Zụrụ Epacadostat (INCB024360) Ntụ ntụ: Site na AASraw
/blog/Epacadostat (INCB024360)/Zụrụ Epacadostat (INCB024360) Ntụ ntụ: Nchapụta Nyocha Site na Ihe Ngwọta AASraw
Ihe na 06 / 05 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na Epacadostat (INCB024360).
Ihe niile banyere Prilocaine ntụ ntụ
1.Epacadostat ntụ ntụ-CAS: 1204669-58-8
2.Epacadostat (INCB024360) ntụ ntụ Njirimara
3. Epacadostat ntụ ntụ kwadoro
4.Epacadostat ntụ ntụ nwere ike ịghọ Ngwọta Nhọrọ nke Nhọrọ na Melanoma?
5. Kedu ihe ị ga-ekwu bụ ihe ọhụrụ na INCB024360 Powder na ihe ọzọ na-esote ya?
6.Abụ onye na Nivolumab na INCB024360 ntụ ntụ?
7. Zụrụ Epacadostat ntụ ntụ online-AASraw
1. Epacadostat ntụ ntụ - Ntọala: 1204669-58-8
Indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) bụ mmeghe nkwụnye nsogbu nke na-agbanwe usoro mgbochi mgbochi ahụ site n'ịkwalite ọkpụkpụ T cell usoro iwu na igbochi mmepụta ụbụrụ T, na-eme ka ụbụrụ na-emewanye site n'ikwe ka mkpụrụ ndụ kansa ghara izere nyocha. Epacadostat ntụ ntụ bụ nchọpụta, onye nwere ike ịmepụta ihe na-edozi ahụ nke nje nke IDO1 nke na-achịkwa ụbụrụ na-adịghịzi enwe microenvironment, si otú ahụ na-eweghachi azịza ndị na-enweghị nchịkwa dị irè. Na nyocha nke otu-ogwe aka, nchikota Epacadostat ntụ ntụ na ndị na-eme nchọpụta na-enweghị nyocha egosiwo ndị na-arịa ọrịa na-adịghị ahụkebe ma ọ bụ metastatic melanoma. N'ime nchọpụta ndị a, Epacadostat ntụ ntụ jikọtara ya na CTLA-4 inhibitor ipilimumab ma ọ bụ onye na-emechi PD-1 KEYTRUDA mere ka ọnụ ọgụgụ nzaghachi dịkwuo tụnyere nyocha nke ndị na-emechi ihe nkwụnye nsogbu.
2. Epacadostat (INCB024360) ntụ ntụ Njirimara
Product Name Epacadostat (INCB024360) Ntụ ntụ
molekụla Formula C11H13BrFN7O4S
molekụla arọ 438.23
Melt Point 151-153 ° C
nchekwa temp -20 Celsius C Freezer
E kwesiri ikpochapu ntụ ntụ na-aga n'ihu iji immunotherapy. Ahụ nwere enzyme a na-akpọ IDO, nke na-egbochi sel T na-arụ ọrụ ha. Epacadostat ntụ ntụ bụ onye nkedo IDO, nke pụtara na ọ na-egbochi IDO iji kwụsị mkpụrụ ndụ T.
Incyte nwere olileanya na Epacadostat ntụ ntụ, ya na Keytruda, ga-alụso ọrịa cancer ọgụ karịa Keytruda. Ma Epacadostat ntụ ntụ kwụsịrị ịkwụsị ọrịa kansa, ọ bụghị nye aka n'ozuzu ya. Ikpe ikpe na-ezighị ezi mere ka Incyte gbanye ihe karịrị 19 pasent na Friday; Ebe ndị Merck nọ na-eru nso 3 percent, ọ bụ ezie na nke ahụ dịka selloff na ahịa ahịa.
"Anyị na-enwe mmechuihu na ọmụmụ ihe a akwadoghị arụ ọrụ nke Epacadostat ntụ ntụ ha na KEYTRUDA na ndị ọrịa na-emeghị ihe ọ bụla ma ọ bụ na-emeghị ihe ọ bụla, "ka Dr. Steven Stein, bụ onye isi ahụike nke Incyte kwuru, na a tọhapụrụ ya. "Anyị nọgidere raara onwe anyị nye na ị gbanwee ọgwụgwọ ọrịa cancer ma nọgide na-enyocha otú mgbochi IDO1 na usoro ihe omume ndị ọzọ nwere ike isi meziwanye ihe maka ndị ọrịa."
Mgbe o kwusịrị ọmụmụ ihe mgbu, Incyte chọrọ ịnwale Epacadostat ntụ ntụ na ụdị ọrịa cancer ndị ọzọ. Dr. Jason Luke, onye ọkà mmụta banyere oncologist na Mahadum Chicago, kwenyere na akwụkwọ Incyte nyochare onye na-arịa ọrịa nke dị oke. Naanị ndị ọrịa na-arịa ọrịa T na-ahụ ọkụ na-eme na-emeghachi omume na immunotherapy. Ndị na-enweghị T na-arịa ọrịa shuga na-arịa ọrịa cell adịghị enwe mmeghachi omume na-adịghịzi na ya megide cancer. Ndị na-egbochi IDO agaghị eme ihe ọ bụla.
"Nke a bụ ihe mere anyị ji chọọ ịhọrọ onye ọrịa ahụ nwere nzaghachi," ka Luk kwuru. Maka ndị ọrịa nwere nzaghachi na-adịghịzi, Epacadostat ntụ ntụ ka nwere ike ịdị irè. N'ụzọ dị mwute, nke a bụ obere ndị ọrịa cancer.
Ndị dọkịta nwere ike iji sequencing dabeere na RNA iji nwalee ma ọ bụrụ na onye ọrịa ga-abụ onye isi maka immunotherapy. Ọ bụ ezie na akwụkwọ akụkọ Incyte na Merck na-ekwu banyere kansa cancer, Luk kwuru na ndị na-eme ihe banyere IDO nwere ike inyere ndị a na-arịa ọrịa aka na ụdị ọrịa ọ bụla aka.
Dr. Roy Herbst, onye ọkachamara n'ihe banyere ọkà mmụta sayensị nke Yale, kwenyere na ọ dịghị ngwọta ọ bụla nwere ike ime-ngwọta cancer niile. "Ị ga-ahazi immunotherapy," ka o kwuru. "Ikwesiri ịma onye ga - erite uru na ọgwụ A na onye ga - erite uru na ọgwụ B."
Nyocha ndị na-abanye n'ime immunotherapy, otú ahụ ka ndị dọkịta ga-aghọta ihe kacha mma iji mesoo ndị ọrịa. Na - ejikọta ọgwụ dị iche iche, dị ka Merck na Incyte na - agbalị ime, nwere ike imezi usoro ọgwụgwọ n'ọdịnihu.
Ọbụna na ọnwụnwa ikpe ahụ, "Ọ bụ mmasị niile ugbu a," ka Herbst kwuru.
4. Epacadostat ntụ ntụ nwere ike ịghọ Ngwọta Nhọrọ nke Nhọrọ na Melanoma
Ọ na-ekwu na inye ha ipilimumab / nivolumab bụ ezigbo echiche n'ihi na ha ga-enweta uru dị ukwuu site na ipilimumab / nivolumab na ọrịa na ụbụrụ dịka ha ga-achọ ma ọ bụrụ na ọrịa ahụ bụ ụkọ. Ọ ga-emetụta mmetụta ndị mmadụ na-eme. Ọ na-egosi na inwe ụbụrụ metastases abụghị ọnwu ọnwụ.
Ọ bụrụ na ị laghachi azụ MDX010-020 ọmụmụ, nke bụ ọmụmụ nke dugara ahabanye ipilimumab na 2011. Akara dị mma nke ndị ọrịa ahụ nwere ụbụrụ ụbụrụ mbụ nke a na-ahụkarị, ọ dịghịkwa njọ ha karịa ndị na-enweghị ụbụrụ ụbụrụ. Ntu aro ịbụ na inwe ụbụrụ ụbụrụ n'afọ nke nkwụsị nchọpụta abụghị ọnwu ọnwụ, ụfọdụ n'ime ndị ọrịa ahụ ga-adịgide ndụ ogologo oge.
Anyị niile ghọtara na mgbe ụbụrụ na ụbụrụ na-ejikọta ihe ndị ọzọ na-apụtaghị ìhè dịka akwa lactate dehydrogenase (LDH), ọtụtụ ebe ọrịa, na ọnọdụ arụmọrụ na-adịghị mma, ma ọ bụrụ na ị bụ LDH dị ala, onye na-arịa ọrịa ụbụrụ dị ala nke na-eme inwe ụbụrụ metastases , ị nwere ike ime nke ọma na ipilimumab plus nivolumab. Nke ahụ bụ ozi ahụ.
INCB024360 Powderhas nọ n'ọtụtụ njikọta, [ma] ole na ole n'ime ha emeela agadi. Ihe kacha amasị m na ọtụtụ ndị ọrụ ibe m bụ ihe ọmụmụ III nke Epacadostat (INCB024360) Ngwá ọkụ na T-VEC ma ọ bụ na-enweghị na INCB024360 Powderwith ihe nkedo IDO INCB024360 ntụ ntụ na-enweghị.
Ebe ọ bụ na lanarị-free survival (PFS) bụ njedebe, ma ọ dịkarịa ala nke INCB024360 Powder trial, anyị ga-anụ ihe n'ime afọ. O nwere ike ịbụ n'oge 2017 ESMO Congress, mana ma ọ ga-abụ na 2018 ASCO Annual Meeting. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ọmụmụ ihe dị mma, nke ahụ ga-adọrọ mmasị.
Nke a na-eweta nsogbu nke ihe ma ọ bụrụ na ị daa-ọkara ma ọ bụ karịa ndị ọrịa ga-ada n'ime afọ mbụ nke afọ-gịnị ka ị na-eme mgbe ahụ? Ị na-enye otu-ụlọ ọrụ ipilimumab? Ị na-enye ipilimumab / nivolumab? Ọ na-atụ aro na anyị kwesịrị ịṅa ntị na ịme ihe ipilimumab. Ipilimumab bụ mgbe ọjọọ mmadụ. Ọ bara uru na nivolumab ma ọ bụ INCB024360 Powderbut, nke ọzọ karịa nke ahụ, otu-ọrụ ipilimumab abụghị na-ewu ewu.
Ọ bụrụ na INCB024360 Powder na-aghọ nchịkọta nhọrọ nke nhọrọ, mgbe ahụ, anyị ga-amalite iche echiche banyere ihe ị ga-ejikọta na ipilimumab. Ipiliumumab na T-VEC? Ipilimumab na T-VEC-na usoro nke abụọ nke ọmụmụ nke ndị 198 ọrịa ndị e nyere na 2017 ASCO Nzukọ Kwa Afọ-nwere ihe karịrị 30% nzaghachi omume. Nke ahụ dị mma.
Anyị amaghị ihe ga-eme ogologo oge; ọ bụ n'oge. Otú ọ dị, nke ahụ ga-abụ nhọrọ nhọrọ nke abụọ ma ọ bụrụ na INCB024360 Powderbecome bụ nhọrọ nke mbụ. Mgbe ahụ, gịnị ka ị ga - eme ma ọ bụrụ na ngosipụta nke ipilimumab / nivolumab bụ ọtụtụ nsí ma ọ bụ dị irè na 1 na 2 afọ?
Mgbe ahụ, okpukpu ahụ ga-alaghachi azụ ugbu a, ndị mmadụ ga-eji ipilimumab / nivolumab mee ihe na nkwụsị ihu na mgbe ahụ nwere ike iji INCB024360 Powderin nhazi nke abụọ. Ị ga-enwe ọtụtụ nhọrọ na nke ahụ dị mma maka ndị ọrịa.
Ọ ga - arụrịta ụka n'etiti ndị dọkịta banyere ihe ha ji eme ihe mbụ. Ọ ga-abụ akụnụba dị ukwuu iji nwee ike ịgwọ ndị ọrịa, nke ga-adị mma. Ị ga-enwekwu ihe mgbaru ọsọ na mgbaru ọsọ-nke pụtara na ị ga-enwerịrị ohere iji mee ka mmadụ ghọọ onye mgbagha ogologo oge ma nwee ike ịgwọ ha.
6. Onye ọ bụla nọ na Nivolumab na INCB024360 Powdertrial?
♣ Niki: Ndewo onye obula! M na-achọsi ike ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ ebe a anọwo na-anwale ikpe a? Abụ m Onye Nlekọta 4 Nkeji nke mejupụtara INN 4 (October 2015 - December 2015) ma abụghị onye ọrụ. Emere m 2 na-agbaso Pet Scans mgbe m gwọchara ya na Dec 17th na Jenụwarị 28 nke gosipụtara mkpanaka m (mgbidi ụlọ) ka ọ na-eto eto. Ma ugbu a, enwere m ọnyá dị iche iche na mpempe akwụkwọ m, mana ka ọ na-amasịkarị m n'akụkụ aka ekpe m ahụ m. Enwere m onye ọkachamara na mịkọm na-arụ ọrụ na di m ma mana ugbu a ka m na-atụ aro na m ga-aga n'ihu na ịnwa ikpe. O kwesịghị iju m anya na mpempe nke ule a na-eme ma ọ bụrụ na ọ bụ mgbe ụfọdụ, ọ na-adị ya ka ọ dị njọ. M na-edozi Ipi n'eziokwu, n'ezie nke nwere obere mmetụta dị iche iche ma e wezụga obere ntakịrị ma m na-atụ egwu mgbe ọ bụla gbasara ọgwụ ọjọọ. Usoro ikpe a gụnyere ịnara ọgwụ (Epacadostat ntụ ntụ) kwa ụbọchị na infusion nke nivolumab kwa izu abụọ. Ọ dị onye ọ bụla site na nke a? Mmetụta dị na ya? Na-emeghachi omume maka ọgwụgwọ ahụ? Anyị na-agafe nke a ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ, ọ na-adịkwa m ka anyị amalite ịghọtakwu ọgwụgwọ n'ihi na anyị na-ahapụlata oge ọ bụla m nwere nchịkọta nchịkọta. Na-ewe iwe ma m kpebisikwara ike inweta! ntinye ọ bụla ga-egwu! Ọtụtụ ekele na ịhụnanya!
♣ Emily: Malite na ikpe a na 4 / 12. Ekwesiri ịkwụsị ọgwụ ọjọọ maka otu izu n'ihi ajọ ọkụ ọkụ (ọ bụghị ihe ọhụụ nke ọkụ ọkụ), ma ọ bụ mmeghachi omume na-adịghị mma nye ọgwụ. Ugbu a, ọ dị ka ihe ọkụ ọkụ ahụ apụla ma laghachi azụ na ọgwụ ahụ ọzọ.
naanị mmetụta ọzọ dị na ya na-esiri m ngwa ngwa ma na-ehi ụra karịa ka ọ dị. Ọbụna ihe ọkụ ọkụ na-anabata ya ọbụna mgbe ọ kachasị njọ (banyere 4 / 25). Ya mere, ruo ugbu a, ọ na-adị mfe iji ngwa ngwa ma mmetụta ndị dị oke ntakịrị.
Amaghị ma ọ na-eme ihe ọma dị ugbu a, dịka nchoputa mbụ m na-adịghị ruo 6 / 3. Ana m ewere mkpụrụ ọgwụ 6 kwa ụbọchị n'ebughị ihe ọ bụla na-emetụta otu izu abụọ ọzọ nke na-ewere ọnọdụ na ụlọ ọgwụ. Enwere m olile anya na ngwakọta a ga-emepụta ụfọdụ nsonaazụ dị mma ebe ihe ndị gara aga emechaghị mma.
♣ Christal: Hi, A chọpụtara di m n'April nke afo a na mucosal melanoma na ogwu ogwu ya. Ọ malitere ikpe a na May. N'ikpochapu ya ikpochapu isi ogwu ya enweghi ike ichuta ya, obu ezie na o nwere otutu ogwu ozo n'olu ya ha kwenyere na ha adighi ozo n'ime ha. O yiri ka ọ dị mma na anụ anụ na-eme ka ọ dị m mkpa, n'ihi na ọ bụ ebe ahụ ka ọrịa cancer "nwụrụ anwụ" ga-esi na ya si na ya pụta.
Nanị mmetụta ya na-akpata bụ ike ọgwụgwụ na ọnụ mmiri. Enye ama enen̄ede ọsọn̄ọ ada ke akpa ini ikpe. Ọ na - ekwu na ọ bụ onye na - agba ume kama ọ na - agba ịnyịnya ígwè ya na - arụ ọrụ n'ụbọchị ndị mara mma, ma na - aga 5 ụbọchị izu. Ọ bụ anụ ọhịa. Ọnụ akọrọ dị ezigbo egwu. Mgbe ụfọdụ ọ na-esiri ike nghọta, mana ọ na-etipịa ọrịa cancer a ka o wee dị ka ntakịrị ego ị ga-akwụ. Karịsịa n'ihi na anyị nwere nwa nwoke 6 afọ.
Nna m nwụrụ site na mlanoma melanoma na 2011 na abụrụ m RN ụlọ ọgwụ. Ọ bụ ihe na-akpali akpali (ma ọ bụ onwe ya) iji hụ ọganihu na ọgwụgwọ mgbu. Nna m mere ihe nwatakịrị 5 n'ụlọ ọgwụ na 9 afọ mgbe a chọpụtachara ya. Ọ na-atụ m n'anya nke ukwuu, ma ana m enwe ekele na o nyere aka na sayensị na-edebe di m / ụmụ m papa n'ebe a.
A na m echere gị echiche kacha mma. Ekwenyere m na anyị na-eme akụkọ ihe mere eme.
"Ọ bụrụ na a kọọrọ akụkọ banyere ndị dọkịta akụkọ banyere ndị dọkịta, ọ na-eme ka onyinye ha guzosie ike n'ọnọdụ nke ndị ọzọ na-arịa ọrịa sustantive." --Siddhatha Mukherjee
Tom Tom: Amaara m na okwu a dị ntakịrị ugbu a, ma ikpe ahụ dị ugbu a, ya mere, achọrọ m ịde ọkwa na m nọkwa na nke a. Enwere m 3 infusions (ọ bụla 2 izu). Ka ọ dị ugbu a, mmetụta ndị dị na ya na-atụgharị (n'ejighị ọkụ ọkụ) na obere ike ọgwụgwụ. M na-achọpụta na m na-ehi ụra ruo ogologo oge, na mgbe ụfọdụ, na-eburu m ihe mgbochi. A naghị emetụta ọtụtụ ọrụ kwa ụbọchị, mana m na-aghọta njedebe nke ọgwụ ahụ mgbe ị na-agbalị ịmecha mmemme nke Crossfit ka m na-enweghị ike ime dika m na-eme.
Enwere m 2C melanoma na mpempe aka nri m na 2012 na itinye aka na lymph node. Ọ laghachiri na 2015 dị n'elu aka nri m dịka mpempe akwụkwọ ọzọ. N'oge a, ọ bụ 3C dị ka ọnụọgụ abụọ nke mkpụrụedemede ahụ gosipụtara mkpụrụ ndụ melanoma microscopic. Ha mere mgbatụ dị ukwuu na akpụkpọ anụ iji kpuchie ya. Agbalịrị m ippy ma ọ bụ naanị 3 infusions (10mg / kg dose) na-aga n'ihu tupu mwee 1 ọrụ. Mgbe ọnwa ole na ole gafechara, achọpụtara m ihe m chere na ọ bụ ụbụrụ m n'akụkụ aka nri m nke na-enye nsogbu. O mere ka ọ bụrụ abụm nke jupụtara na melanoma.
Enwere M PET CT na 4 izu, ana m aga MD Anderson na Houston n'izu na-abịa maka echiche nke abụọ. Aga m agbalịa idebe akwụkwọ emelitere dị ka saịtị a bụụrụ m nnukwu ihe enyemaka n'oge mgba a, ana m enwe olileanya na m ga-enyere onye ọzọ aka. Ugbu a, m na-arịa ọrịa na UCSF.
7. Zụrụ Epacadostat Powder online-AASraw
Epacadostat Powderis a reagent powder, ihe ka ọtụtụ n'ime ha ka nọ na nyocha nchọpụta na-adịghị arụ ọrụ. Ndị nchọpụta na-arụsi ọrụ ike na-enyocha ihe omimi ahụ. Ọ nwere ike ịdọrọ uche nke otutu Powdersuppliers, ma ị gaghị ahụ ọtụtụ ndị na-eweta ọrụ bụ ọwa ọkachamara, ya mere nwere ike inye akwa Epacadostat Powder, dị ka nchọpụta ahịa si egosi na ugbu a: AASraw nwere ike inye ezigbo àgwà, ịdị ọcha dị elu nke ntụ ntụ, nzaghachi ndị ahịa dị mma.
Ndị mmadụ ga-achọ ịzụta Epacadostat Powder online si Epacadostat Ngwá ọrụ suppliers. Zụrụ Epacadostat Powderfrom AASraw na nnyefe n'enweghị nsogbu.
- Ogologo Ogo na Ngbagwoju Anya Ahịa:
1) Standard Standard: USP 35
2) Ịdị ọcha:> 99%
3) Anyị bụ ndị na-emepụta ihe ma nwee ike inye ngwaahịa ụlọ ahịa dị elu.
- Ngwa ngwa ngwa na nchekwa:
1) A ga-eziga ngalaba n'ime 12 awa mgbe ịkwụ ụgwọ. Nọmba ọnụọgụgụ dị
2) Ụgbọ mmiri na-ejide n'aka. Usoro ụzọ njem dị iche iche maka nhọrọ gị.
- Anyị nwere ndị ahịa n'oge ụwa dum:
1) Ọrụ ọkachamara na ahụmahụ bara ọgaranya na-eme ka ndị ahịa chere na ahụ ruru ala, ngwaahịa zuru oke na ngwa ngwa ngwa ngwa na-ezute ọchịchọ ha.
2) Nzaghachi ahịa na nzaghachi ngwongwo ga-enwe ekele, izute ọrụ ndị ahịa bụ ọrụ anyị.
3) Ụdị elu, ọnụahịa mpi, nnyefe ngwa ngwa, ọrụ mbụ na-enweta ntụkwasị obi na otuto sitere n'aka ndị ahịa.
- Ụkpụrụ Atọ
1) Nkwenye na-adịghị ize ndụ: nhazi nke ọwa, chebe nzuzo nke ndị ahịa .Ma naanị, hụ na ị ga-ebigharị.
2) Agbanwela mgbe niile: Ngwaahịa ahụ ga-anọgide na-adị ọcha, agaghị agbanwe agbanwe, Elu àgwà bụ ọdịbendị nke ụlọ ọrụ anyị.
3) Ezi ọrụ: Ozugbo o kwere mee iji dozie nsogbu ndị ahịa, ka ndị ahịa nweta ngwaahịa ahụ n'enweghị nsogbu.
Zụrụ dịka Ntanye CRL-40,940 (BisfluoroModafinil) dị ọcha Tetracaine Hydrochloride ntụ ntụ: zụta Tetracaine ntụ ntụ n'enweghị nsogbu